दाङ दुर्घटना: ‘साँझ चाँडै आउँछौ’ भन्दै बाईबाईको हात हल्लाउनेहरु फर्किएनन « Postpati – News For All
दाङ दुर्घटना: ‘साँझ चाँडै आउँछौ’ भन्दै बाईबाईको हात हल्लाउनेहरु फर्किएनन
बुटवल । ‘बाबा म साँझ आउँछु’ भन्दै बाईबाईको हात हल्लाएका दाङ घोराई उपमहानगरपालिका–१४ का रामबहादुर जिएमका छोरा १७ वर्षीय एक मात्र छोरा विरेन्द्र जिएमको त्यो बाईबाईको हात हल्लाई सधैँका लागि अन्तिम बन्न पुग्यो ।
आज विहान छोराको शव बुझ्न राप्ती अञ्चल अस्पताको शवगृहमा गहभरी आँशु पार्दै कुरिरहेका बाबु जिएम भन्छन्, ‘हिजो सल्यानको जंगलमा प्राक्टिकल गर्न जाँदैछौं बाबा भन्यो र मोटरसाईकलमा त्यस्तै साढे ६ बजेदेखि ४० मिनेटको बीचमा क्याम्पस नजिकै लगेर छाडेको हुँ, साँझ चाँडै आउँछु बाबा भन्दै थियो । अहिले यस्तो देख्नुप¥यो ।’
तीन छोरी र एक मात्र छोरा भएको रामबहादुरले आमालाई र दिदी बहिनीहरुलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको बताए । ‘हिजो दिउँसो सल्यानबाटै काकालाई फोन गरेर अंकल म अहिले सल्यान आएको छु । साँझ चाँडै नै घर आउँछु है भनेर फोन समेत गरेको रहेछ ।’
मृत्यु हुनेहरुमध्ये शिक्षक र चालक बाहेक अधिकांश १६ देखि २२ बर्ष उमेरका कलिला मुनाहरु थिए । सुन्दर भविश्यका कर्णधार मानिएका तिनै कलिला मुनाहरुलाई नियतिले कहिल्लै नपलाउने गरी निमोठेर लगेको छ । ती सबैले प्राविधिक शिक्षा अध्यान गरेर चाँडै रोजगारी हाँसिल गरी सुन्दर भविष्य सजाउने सपना साँचेका थिए । जुन अधुरै रह्यो ।
शुक्रवार बिहान सहिद कृष्ण सेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट डिप्लोमा फरेष्टीको अब्जरभेसन गर्न हिँडेका ३४ जना विद्यार्थी, दुई जना शिक्षक र दुई जना चालक दल हिँड्ने बेलामा र दुर्घटनाको अघिसम्म निकै हाँसीखुसी गर्दै थिए । भ्रमणका क्रममा गीत गाउने नाच्ने गरेर रमाईलो गरिन्छ ।
शव राखिएको स्थान राप्ती अञ्चल अस्पालमा मृतकका आफन्तको रोदन र चित्कारले बाहिरबाट जाने मानिसहरुलाई समेत आँशु थाम्न गाह्रो परिरहेको थियो ।
‘हे अलछिने दैव.. बरु मै बुढोलाई लगेको भए हुन्थ्यो नि, मेरो मुटु मेरो छोरालाई कलिलैमा किन खोसिस भनेर छोराको शवमा टाउको राखेर डाँको छाड्नेहरु थिए । मृत्यु भएका शिक्षक नरेश वलीकी श्रीमतीे रुँँदारुँदै बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् ।
‘हे.. मेरो.. हजुर.. मलाई निक एक्लै पारेर जानुभयो, यो छोरीले अब बाबा कसलाई भन्ने…? उनको यस्तो विलौनाले सारालाई रुवाईरहेको थियो । शिक्षक वलीका दाजु सर्कबहादुर वली घुँडामा टाउको राखेर बुहारीलाई सम्झाउँदै थिए तर आफू नै थामिन सकेनन् ।
दाजु सर्कबहादुरका अनुसार दाङमै डेरा गरेर उनीहरुले दुई वर्षीया छोरीलाई पढाउँदै आएका थिए । अर्का शिक्षक पदमप्रसाद घिमिरे दाङ जिल्लाभर होनाहर युवाका रुपमा परिचित थिए । घिमिरेका आफन्तजन, साथीसंगीको रुवावासीको भीड प्रहरीलाई थेगी साध्य थिएन ।
कतिपय विद्यार्थीहरुको भर्खर विवाह भएको थियो भने कतिपय कोर्श सक्न साथ विवाह गर्ने तयारीमा थिए । कतिपयको प्रेमसम्वन्ध पनि धोगीझैँ छिनिएको छ ।
मृत्यु हुनेमा जुम्लाका मात्रै ११ जना रहेका छन् । दाङका ६ जना गरी १९ जना पुरुष र ४ जना महिला छन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी सम्झेरै जुम्ला, डोल्पा जस्ता दुर्गम गाउँँका युवायुवतीहरु प्राविधिक शिक्षा पढ्न आएका थिए ।
केहि दिनअघि सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ दाङको साधरण सभामा सहिद कृष्ण सेन ईच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरुले प्रभातफेरीमा साथ थिएका थिए । शिक्षालयको युनिफर्ममा सजिएका उनीहरु सेना प्रहरीमा तालिम प्राप्त जस्तै अनुशासित र लामबद्ध देखिन्थे । एकदेखि अर्कोसँग मुस्कान साटासाट गरेका थिए ।
दाङकी पत्रकार रिता लामाले फेसबुकमा आफूले त्यतिबेला खिचेका तस्वीर सार्वजनिक गर्दै लेख्छिन्– ‘दुर्घटनामा को–को पर्नुभयो को पर्नुभएन थाह पाउन सकिन तर मेरो क्यामेराले कैद गरेका यी फोटो । म यहि फोटा हेरिरहेकी छु ।’
आज बिहानै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल) ले फेसबुकमार्फत गहिरो दुख व्यक्त गर्दै घाईतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । अपरान्ह् राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विभिन्न दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले शोक व्यक्त गरेका छन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा १२ जना घाईतेहरुलाई हेलिकाप्टर मगाएर काठमाडौं पठाईएको छ ।
दाङमा एक हप्ताभित्रै तीन सवारी दुर्घटना भएका छन । केहि दिनअघि मात्र जन्ती चढेको स्कारयियो गाडी दुर्घटना हुँदा बाँके सम्शेरगञ्जका बेहुलाका आमाबाबुसहित ६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
तस्बिरः एउटै कक्षाका हिजोसम्मका उनै विद्यार्थी आज विहान एउटै स्थानमा लहरै शवमा परिणत र केहि दिनअघि मात्र तस्बिरमा त्यसै शिक्षालयका विद्यार्थीहरु । केही तस्बिरहरु हामी तपाईंलाई देखाउन गएका छौं ।
दाङ दुर्घटनामा मृत्युहरु
दाङको राम्रीमा भएको बस दुर्घटनामापरि मृत्यु भएका २३ जनाकै सनाखत भएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार दाङका ६ जना, जुम्लाका ११ जना, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, कञ्चनपुर, डोल्पा र रुकुमपूर्बका १:१ जना रहेका छन् ।
जसमा दाङका बस चालक घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का २६ बर्षिय मदन खत्री क्षेत्री, शिक्षालयका शिक्षकहरु घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का २८ बर्षिय प्रदिप घिमिरे, सहचालक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का २२ बर्षीय गणेश बिक, विद्यार्थीहरु घोराही उपमहानगरपालिका १४ घोराहीका १९ बर्षिय विजय घर्ती, बबई गाउँपालिका ५ का २१ बर्षिय कबिता खत्री,दंगीशरण गाउँपालिका १ घर भएका २० बर्षिय सञ्जीत रत्गैयाँ रहेका छन् ।
त्यस्तै जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ६ घर भएका १६ बर्षिया कुशुम रावल, जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ३ घरभएका १७ बर्षिय हिम्मत बोहरा, जुम्ला कन्का सुन्दरी गाउँपालिका ५ घर भएका २० बर्षिय विरेन्द्र कडारा , जुम्ला हिमा गाउँपालिका ५ घर भएका १७ बर्षिया शैलजा शाही, जुम्ला चन्दनथान १० का १८ बर्षीय रुपेश शाही, जुम्ला चन्दननाथ १४ का १७ बर्षीय रितेन्द्र शाही, जुम्ला चन्दननाथ ५ का देवीप्रसाद उपाध्याय,जुम्ला तिला गाउँपालिका १ का जंगबहादुर बिक, जुम्ला चन्दननाथ ३ का १८ बर्षका अर्जुन शाही, जुम्ला चन्दननाथ १० का बिपना खत्री , जुम्ला तिला गाउँपालिका ३ का रमेश उपाध्याय रहेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षक रुकुम भुमे गाउँपालिका ६ का २८ बर्षिय नरेश वली , डोल्पा जग्दुला ७ निवासी १६ बर्षीय गजेन्द्र ऐरी, जाजरकोट भेरीगंगा नगरपालिका ४ घरभएका १७ बर्षिय आतिस नेपाली, कन्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका ५ घर भएका १७ बर्षीय खेमराज भट्ट, बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिकाका १७ बर्षीय महेश जोशी, बाजुरा बुढिगंगा १० का लोकेन्द्र रावलको दुर्घटनामा परि मृत्युभएको हो ।
(रातो पाटीका लागि प्रेम सुनारको रिपोर्ट )
७ पुष २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित